15% Off အသေးစိတ်
အပြင်ထွက်စရာမလိုပဲ… Delivery နဲ့ မှာရင်လည်း ပရိုမိုးရှင်းရမှာတဲ့နော်…
မုန်တိုင်းထန်ပြီးရင် လေပြေလာစမြဲမို့ အခုအခြေနေလေးမှာတော့ အိမ်မှာပဲ အေးဆေးစွာအနားယူပြီး အဟာရပြည့်အောင်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်…
အစားအသောက်အတွက်ကတော့ စိတ်မပူပါနဲ့…. Dr.Kitchen ရဲ့ Menu တွေထဲကမှ ပြောင်ဖူးချိစ် အပြင် ထမင်းပူပူလေး နဲ့ ပဲစာစား ၊ ဒီအတိုင်းပဲစားစား စားလို့ကောင်းတဲ့ ဝက်ဂုတ်သားကင် Menu နှစ်ခုကို B&F Clubcard ကိုပြသပြီး ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် (15) % Off ပရိုမိုးရှင်းရမှာဆိုတော့ အခုလို အချိန်မျိုးမှာ တကယ့်ကို ကွက်တိပါပဲ…
ဘယ်လို မှာရမလဲ??? Dr.Kitchen Page ရဲ့ Messenger Box ကနေပြီးတော့ မှာယူနိုင်သလို ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်… မှာယူတဲ့ အချိန်မှာ B&F Clubcard ကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ် ပြသပေးရုံ နဲ့ ပရိုမိုးရှင်း ခံစားခွင့်ရှိပါပြီနော်…
Dr.Kitchen မှာဆိုရင် တခြား Menu ပေါင်းများစွာ ရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ B&F Clubcard နဲ့ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ ပြောင်းဖူးချိစ် နဲ့ ဝက်ဂုတ်သားကင် Menu အတွက်သာ ပရိုမိုးရှင်းခံစားခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်….
တခြားသော Delivery Service နဲ့ မှာယူမယ်ဆိုရင်တော့ ပရိုမိုးရှင်း ခံစားခွင့်မရှိတာမို့ Dr.Kitchen ကိုတိုက်ရိုက်မှာယူပေးဖို့တော့ သတိရပါနော်…
Contact No - Pls Contact Us - 09 250 279 634 (Latha )/ 09 793 367 905 (Bahan)
Facebook Page - https://www.facebook.com/dr.kitchen.ygn/
ပရိမိုးရှင်း အကြောင်းအရာ နဲ့ ပတ်သတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ B&F Clubcard နဲ့ ပတ်သတ် တာပဲဖြစ်ဖြစ် မေးမြန်းလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် 09 895711240 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်….
- Promotion Period 01.Apr.2020 To 30.June.2020
- တခြား Food Delivery များ နှင့် မှာယူသုံးဆောင်ပါက ပရိုမိုးရှင်း ခံစားခွင့်မရနိုင်ပါ...
-ဆိုင်ခွဲ (၂) ဆိုင်လုံးတွင် Take away မှာယူသုံးဆောင်သူတိုင်း ဒီပရိုမိုးရှင်းကို ခံစားခွင့်ရှိပါတယ်...
- Dr.Kitchen ဆိုင်ခွဲများသို့ တိုက်ရိုက်မှာယူပြီး Delivery ပို့ဆောင်ခိုင်းပါက ဒီပရိုမိုးရှင်းကို ခံစားခွင့်ရှိပြီးတော့ Delivery Charges ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်...